မဗဒေါရဲ့ ဗဒေါလမျး: နှင်းစက်ခြေရာ (၁)
Posted by mabaydar at 6:45 PM
ယုံမလားတော့မသိဘူး င့ါမှာလည်း အဲဒီ့လို အဖြစ်အပျက်မျိုးနဲ့ တစ်ထပ်ထဲတူတဲ့ အဖြစ်အပျက်လေး တစ်ခု အဲ့ဒီ့ Y.E.S မှာပဲ ကြုံခဲ့ဖူးတယ်ဟ...။ လူတောင် လွန်ခဲ့တဲ့ ၅ နှစ်ကျော်လောက်ကို ပြန်ရောက်သွားတယ်..။ ဟား..ဟား..။
5/19/2008 1:29 AM
စိတ်ဝင်စားစရာ ကောင်းတယ်...။ ဆက်ရေးပါဦး...။
ရဲဘော် ဆက်လုပ်.... လာဖတ်မယ်(၁-၁၀၀)ထိ....
interesting :P hope to see more..
blackdream!! i attended Y.E.S too. xP